Linux Mint 19 haizounganidza chero data kubva kumushandisi kana komputa yavo | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 19 haizounganidza chero data kubva kumushandisi kana komputa yavo
Vhiki rapfuura takave nekuburitswa kweUbuntu 18.04, vhezheni yeLTS yaive yakakosha zvese kune iyo Ubuntu chirongwa uye kune vashandisi vanoshandisa kugovera uku. Kana iwe waisa iyi vhezheni, iwe unogona kunge wakacherekedza kuti mushure mekumisikidzwa tinobvunzwa kana tichida kutumira data redu kuCanonical kana kwete.
Ubuntu 18.04 inounza nechirongwa chitsva chinonzi Ubuntu Report iyo inounganidza dhata isingazivikanwe kubatsira vanogadzira. Kana zvirinani ndizvo zvakaratidzwa nechikwata cheUbuntu. Iyo inotobvunza iwe kana iwe uchida kuishandisa kana kwete.Izvi zvasimudza makakatanwa uye zvakatonyanya kudaro nechiziviso naLinux Mint kuti mavhezheni avo haazove nechirongwa ichi. A) Hongu, Linux Mint 19, iyo inotevera vhezheni yeLinux Mint, haizove neUbuntu Report uye izvo zvinoreva kuti hazvinyorwe chero data uye log mafaira eedu anoshanda system. Chinhu chinokwezva kutarisisa kwevashandisi vazhinji.
Ubuntu Report ichave chirongwa icho Linux Mint 19 ichave isina uye icho chinotora data rako
Clem Lefebvre aratidza kuti hapana imwe yedzidziso dzinobuda muLinux Mint ichave nechirongwa ichi uye hakuzovi nechimwe chirongwa chinounganidza ruzivo rwevashandisi kana kuchitumira kuchikwata cheLinux Mint kana timu yeUbuntu. Iyo imwe vhezheni yeLinux Mint, LMDE, iri yakavakirwa paDebian haizove yakafanana kana yakafanana software chero.
Uye pamberi pekupokana iko kusahadzika. Isu hatinyatso kuziva kana ichishandiswa kuwana data redu kana zvimwe zvinangwa, asi kana ichishandiswa kusimudzira kugovera, chokwadi ndechekuti Ubuntu haizofarirwa asi kungoshatiriswa. Vanhu vakakurumbira mukati meMahara Software havasati vataure nezve izvi, asi zvakanaka zvinogona kuitika sezvakaitika neAmazon chiyero uye inogona kana kusabviswa muUbuntu 18.10. Chero zvazvingaitika, kana iwe usingavimbe neiyi sisitimu yekuunganidza, iwe uchagara uine Linux Mint 19, iyo minty vhezheni yeUbuntu 18.04 pasina kuunganidza wega data.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 19 haizounganidza chero data kubva kumushandisi kana komputa yavo
Mhoro, ini ndinotarisira kuisa Linux Mint 19 (painowanikwa) pakombuta yangu.
Ini parizvino ndinayo ichimhanya pane Linux Mint 17.3 disk uye Windows 8.1 yakaiswa pane imwe diski uye ndinoda kuichengeta nekuti dzimwe nguva ndinodzoka.
Iwe unogona ndapota kutsanangurira kwandiri maitiro ekuisa iyo nyowani Mint munzvimbo yeiyo yekare, kubva pendrive.
Kana kuti pamwe ndiudzewo dzidziso kwazvinotsanangurwa.
Iko kusava nechokwadi kumwechete kwandinako ini ndinogovana nedzimwe shamwari.
Makorokoto pa linuxadictos.com!
Kubva ndatotenda zvikuru kwazvo. Jorge
Mhoro Jorge. Zviri nani kuita kuiswa kwakachena. Gadzira backup yemafaira ako akakosha, dhawunirodha iyo ISO uye gadzirira bootable pendrive. Tanga kubva ipapo uye paunotanga kuisarudza sarudza bhuku rekuparadzanisa sarudzo panguva yekugadzirisa uye ingobata zvikamu apo iwe une Linux Mint 17.03 yakaiswa. Unogona kudzima uye kugadzirisa zvakare. Kana iwe uine gondohwe rakaringana, haufanire kugadzira iyo SWAP chikamu. Kana zvisiri, zviite uine diki nzvimbo. 1Gb yakakwana. Ini ndinowanzo patsanura iyo HOME kubva kuhurongwa hwekuparadzanisa (ndinotenda iyo mitatu yakajairika zvikamu: Iyo Sisitimu, Imba uye Iyo Shanduko). Saka ini ndinongofanirwa kudzima iyo system partition uye ini handifanirwe kudzima HOME. Uye neizvozvo iwe uchave uine yakawanda mvura system. Ini handina kuwana zvakanaka zviitiko kusimudzira kubva kune imwe vhezheni kuenda kune imwe. Iko kunogara kune zvidiki zvidiki izvo kwaunoisa imwe nguva uye izvo zvinogona kugadziriswa zvirinani kana iwe ukaisa kubva kuZero
Pindura kuna ercherramon
Maitiro ekuisa Cinnamon 3.8 paLinux?
Fedora 28 uye kukwidziridzwa kwayo kwemalaptop kwakatoburitswa kare